Posted on Septambra 23, 2016Oktobra 5, 2016 by Cacilia chase	Mifidy ny marina ho an'ny be taona fanoloana tafo – na famantarana ny tsara indrindra safidy ho an'ny trano vaovao iray – Tsy mora ny asa. Ny tafo vahaolana tonga lafatra ho an'ny trano iray dia mety ho ratsy indrindra ho an'ny hafa safidy marina nidina an-dalambe. Izany satria tsy misy trano roa dia mitovy indrindra, na dia mitovy tsara ny tsirairay. Koa ahoana no mifidy ny tafo vaovao, nomena ny safidy rehetra ao an-tsena? Afaka manomboka amin'ny alalan'ny fametrahana andiam-panontaniana, eo anatrehanao misafidy ny tafo, ny tafo mpiantoka na ny mpanamboatra.
Warren tafo,tafo Ann Arbor,Ann Arbor tafo,Detroit fanavaozana,tafo orinasa tany Michigan,roseville tafo,Detroit roofers,Kalamazoo tafo,Lansing tafo,Metro Detroit tafo,fanamboarana tafo Ann Arbor,tafo Detroit,tafo Michigan,Detroit tafo,Michigan tafo,tafo orinasa Michigan,tafo asa tany Michigan,Auburn tafo mpiantoka,afovato tafo,Michigan tafo fehezan-dalàna,fanamboarana tafo Detroit,tafo contractors tany Michigan,tafo tsara indrindra orinasa tany Michigan,tafo orinasa ara-barotra tany Michigan,ara-barotra tafo Michigan,Michigan tafo orinasa,Michigan tafo contractors,roofers tany Michigan,tafo contractors Michigan,tafo tany Michigan,kristiana Detroit tafo,Dearborn tafo,Detroit Home Improvement,Detroit tafo fanamboarana,Detroit tafo orinasa,Detroit tafo orinasa,Michigan roofers,Port Huron tafo,tafo orinasa tany Michigan,tafo orinasa Michigan,tafo contractors Detroit
1. Inona moa io trano io ny fanambarana iraka?
Alohan'ny antso natao ho Detroit Roofing Service, zavatra voalohany ny adiresy dia ny orinasa ny iraka fanambarana araka ny mifandray amin'ny ny trano.
Tokony ho fantatrao ho betsaka momba ny trano sy ny ho avy araka izay azo atao.
Ve ny tafo orinasa drafitra mba hitandrina ity trano ity ho ampahany amin'ny Real Estate fananan'ny ho amin'ny manaraka 10 ny 20 taona? Misy drafitra mba hanitarana azy io tsy ho ela, na hanova ny fampiasana? Inona avy ny amin'izao fotoana izao sy ny ho avy hitoetra ao, insulation fepetra takiana, hatsarana laharam-pahamehana ary na dia ny fandaharam-potoana ho an-tafontrano fikojakojana fitaovana?
Hanomboka ny fanontaniana amin'ny izay ny trano handeha mba ho ampiasaina amin'ny.
Ohatra, toy ny orinasa kokoa mifindra amin'ny fandidiana 24 ora isan'andro, fito andro isan-kerinandro ny fahafaham-po eran-mpanjifa, ny angona foibe dia tsy maintsy tsy mitsimoka ny niparitaka an-tafontrano. Rano amin'ny solosaina rafitra ankapobeny midika loza.
Manokana napetraka ny olana mipoitra ho hihena-Nanjakazaka tamin'ny namany ny toetrandro. Ve ny tafo anjara amin'ny famerana mari-pana sy ny tahiry hiatrehana olana manan-danja hafa? No anisan'ny tanteraka fandaharana angovo? Misy tsy mitsaha-mitombo ny ahiahiny momba ny tanàn-dehibe hafanana nosy. hisainana, fotsy tafo efa lasa mahaliana ao amin'ireo faritra ireo noho ny antony vitsivitsy. Izy ireo hitandrina ny trano mangatsiaka kokoa, mampihena ny vola lany sy ny famerana mari-pana koa ny hanamaivana ny hafanana-Loading ny manodidina tontolo iainana.
2. Inona no singa ara-batana sy ny vokany eo amin'ny tafo rafitra fantina?
Rehefa avy famantarana ny tanjona sy ny asa nanirahana ny trano, tonga ny fotoana mba hanombanana ny trano mihitsy.
Raha ny tafo fanoloana, mila mitanisa ny toetra ny faritra-tampon-trano mihitsy. Dia tsara kokoa raha tsipiriany-tampon-trano ny habe, endrika, hantsana, tokotanin-tsambo fanorenana, lelan manazava amin'ny antsipirihany mikasika, protrusions, an-tafontrano fahafahana miditra sy ny rafitra efa misy tafo. Miaraka amin'ny fototra ity vaovao, mila mahita ny antony tany am-boalohany intsony tafo dia ampy.
3. Inona no malefaka-hoditra manify tafo safidy dia misy?
Thermoplastic fonontselan'ny dia mifototra amin'ny plastika polymers.
Indrindra TPO fonontselan'ny dia hamafisina amin'ny polyester, fiberglass na izy rehetra mitambatra ny roa, fa unreinforced TPO fonontselan'ny dia misy.
Novaina godorao fonontselan'ny mampiditra ny rijan sy prefabrication tombontsoa ny malefaka-hoditra manify tafo amin'ny sasany ny nentim-paharazana fametrahana teknika ampiasaina amin'ny nanamboatra-up tafo. Novaina godorao taratasy no orinasa-namorona, ahitana ny asfalta izay farany amin'ny fingotra na plastika polymer ho bebe kokoa manovaova, ary mitambatra amin'ny fanamafisana ny hery sy ny fahamarinan-toerana fanampiny.
4. Iza karazana hoditra manify sy miraiki-po rafitra no tsara indrindra ho an'ny ny trano?
Maro ny antony mamaritra ny rafitra tsara indrindra ho an'ny trano manokana. Fa ny ankamaroan'ny trano, Betsaka ny safidy sy ny tombontsoa izay mila ho nolanjaiko hanohitra ny toerana ny fanambarana iraka. Ny fanapahan-kevitra tsy tokony hatao ihany no miorina amin'ny vidiny. Hafa manan-danja ho an'ny fonontselan'ny no fananganana ny ambony, rivotra hatsiaka, mialoha ny fotoana tafo fifamoivoizana sy ny aesthetics.
A vy na hazo tokotanin-tsambo izay manaiky mora foana fasteners manao tsara substrate ho mechanically nohomboany manify.
Ho an'ireo mahakasika ny fanorenana aesthetics, miloko fonontselan'ny dia afaka manao ny tsara tarehy anjara ny trano ny tarehiny.
5. Ve tafo rehetra nanolotra fitaovana ho amin'ny asa toerana hitondra ny Ul marika?
Ankoatra, antoka fa ny tampon-trano fivorian'ny ianao hividy na mamaritra, izay ahitana ny insulation, no ul-sokajiana sy -labeled.
Ataovy azo antoka fa ny vokatra no mahazo anao dia ny tena vokatra izay hitsapana. Tsy tianao ny zavatra izay mitovy nefa tsy mitovy. Jereo fa ny marika teo amin'ny asa toerana sy ho azo antoka singa rehetra ny rafitra fitiliana dia niara-. Te ny hoditra manify notsapaina ny insulation izay mampiasa amin'ny trano.
6. Ve ny rafitra mitaky ny rivotra hanondrotana ny ampy?
Wind hanondrotana ny fahavoazana mety ho be sy lafo. Nanaiky ho toy ny orinasa fenitra, American Society ny Civil injeniera Standard 7-95, “Minimum Design entana ho an'ny trano sy rafitra hafa,” Azo ampiasaina mba hamantarana ny faritra rivotra ny trano. Wind hanondrotana ny fitiliana, toy izay tanterahana ao amin'ny Factory fiaraha-mientana ifampizarana na Underwriters Laboratories, Azo ampiasaina mba hamantarana fa ny voafantina rafitra tafo mihaona na mihoatra ny rivotra an-toerana hanondrotana ny fepetra takiana.
7. Ohatrinona no vita rafitra hanampy ny maty entana lanjan'ny-tampon-trano rafitra?
Amin'ny mifidy reroofing safidy, ny toerana tokony ho mpanatanteraka mahafantatra ny enta-mavesatra-jaza fahaiza-tampon-trano ny tokotanin-tsambo mba ho azo antoka ny tsara malefaka-hoditra manify safidy no voafidy. Ao amin'ny fanorenana vaovao, tahiry in-drafitra vy mety ho tratra matetika amin'ny alalan'ny fametrahana ny iray amin'ireo maivana malefaka-hoditra manify ny rafitra.
A ballasted tafo thermoplastic na EPDM mety mitaky mihoatra noho 1,000 kilao isaky ny 100 kianja feet, raha ny mechanically nifatotra na tanteraka arahina thermoset na thermoplastic hoditra manify Milanja 33 kilao isaky ny 100 kianja feet.
8. Inona avy ireo ny fahaizany sy ny hery ara-bola ny tafo mpiantoka ianao mieritreritra?
Tafo mpiantoka tokony voafidiny tamin'ny fikarakarana lehibe. Ny fampidirana ny tafo vaovao fitaovana sy ny fampiharana teknika ao anatin'ny lasa 10 taona maro no nahatonga ny fanovana. Ny tafo matihanina mpiantoka dia tokony ho zatra amin'ny karazana tafo rafitra, mba hanampy anao hanao fanapahan-kevitra tsara indrindra ho an'ny toerana, mifototra amin'ny teti-bola.
Hamarino fa ireo coverages ao kery nandritra ny fisian'ny ny tafo asa.
Ny fametrahana ny rafitra isan-karazany tafo miovaova be. Ny fanabeazana sy ny fampiofanana no singa manan-danja indrindra eo amin'ny fametrahana ny tafo rafitra. Ataovy azo antoka ny tafo mpiantoka fidinao nanana tsipiriany sy fanofanana mitohy ho amin'ny rafitra napetraka.
Ny National Association Roofing Contractors matihanina dia manolotra fantina tafo Guide. Ankoatry ny, maro mpanamboatra sitrako mpiantoka fandaharana amin'ny fepetra manokana fa tsy maintsy vita alohan'ny roofers fankatoavana.
9. Inona no antony marim-pototra ary iza?
Misy sokajy roa fototra ny tafo fiantohana. Ny mpiantoka ny fiantohana matetika manarona hafa. Ny mpanamboatra manarona ny fiantohana, fara fahakeliny, ny fitaovana, na dia maro aza fonony fanampiny zavatra. Na dia ny fiantohana ny mpanamboatra dia malalaka, dia tsy tanteraka hiaro anareo, raha ny tafo no nety napetraka.
Tsara mamaky sy mahazo izay tafo fiantohana nanatitra ary hijery ny vatsy izay mahafoana azy. Ohatra, fa saika tsy ho vita mba tsy ponded rano rehetra. Ponded ny rano azo vokatry ny lalan-tafo tatatra na deflection ny tokotanin-tampon-trano eo anelanelan'ny andry fanohanana. Open tafo fikolokoloana dia afaka manampy manome antoka fa mbola manan-kery ny fiantohana. Fantaro ny fiantohana teny izay voids ny antoka.
Ny fikojakojana mahazatra fandaharana ahitana ny antsipirihany maso fandinihana-tampon-trano rafitra, manelatselatra, insulation sy ireo singa mba hamantarana izay mety ho olana faritra.
10. Rehefa-tampon-trano no nametraka, Inona no aorian'ny asa fanompoana sy ny fandaharam-pampianarana izay afaka hanao ny trano fitantanana ekipa?
Antokony manokana dia natao mba hanampy ny fanorenana sy foto-drafitrasa mpitantana tompon'ny hianatra bebe kokoa momba ny rafitra isan-karazany tafo, fitaovana sy singa; insulation sy ny fanampin-javatra ny vokatra; singa ny tafo nanaovana; mpiantoka safidy; fiantohana sy ny fikojakojana fiheverana.
Article Source: Sokajy://EzineArticles.com/expert/Julian_Arhire/94516
Article Source: Sokajy://EzineArticles.com/6336340
Posted in UncategorizedTagged Ann Arbor tafo, Auburn tafo mpiantoka, tafo tsara indrindra orinasa tany Michigan, kristiana Detroit tafo, tafo orinasa ara-barotra tany Michigan, ara-barotra tafo Michigan, Dearborn tafo, Detroit Home Improvement, Detroit fanavaozana, Detroit tafo fanamboarana, Detroit roofers, Detroit tafo, Detroit tafo orinasa, Detroit tafo orinasa, afovato tafo, Kalamazoo tafo, Lansing tafo, Metro Detroit tafo, Michigan roofers, Michigan tafo, Michigan tafo fehezan-dalàna, Michigan tafo orinasa, Michigan tafo contractors, Port Huron tafo, tafo orinasa tany Michigan, fanamboarana tafo Ann Arbor, fanamboarana tafo Detroit, roofers tany Michigan, tafo Ann Arbor, tafo orinasa tany Michigan, tafo orinasa Michigan, tafo orinasa Michigan, tafo contractors Detroit, tafo contractors tany Michigan, tafo contractors Michigan, tafo Detroit, tafo tany Michigan, tafo asa tany Michigan, tafo Michigan, roseville tafo, Warren tafo	Post navigation
← Ahoana no hahitana Roofing Repair? Detroit, MITafo Contractors Michigan Detroit→	Add your own widgets here	Theme: Dustland Express by Kaira